Ukungatohozi kwaba yithuba kosephakela izitolo imifino
UNKK Nontando Thabethe, ongumlimi, onenkampani ekhiqiza imifino edayiswa iqandisiwe i-Elite Crop, edayisela izitolo ezinkulu ngemikhiqizo yakhe
PHILI MJOLI | May 21, 2020
UKUNGASEBENZI kuholele owesifazane wasePinetown ekutheni aphenduke umlimi ophakela izitolo ngemikhiqizo.
UNkk Nontando ‘Ntando’ Thabethe (42) ungumsunguli wenkampani etshalayo, ikhiqize imifino egcinwa efrijini nefakwa emathinini i-Elite Crop.
Imikhiqizo yakhe yi-mix vegetables, country crop, sweetcorn no-green beans ehlala efrijini. Okuhlala emathinini yi-baked beans, chakalaka, ne-tomato and basil.
Uthe yonke le mikhiqizo yakhe ubeyenzela emzini wakhe.
UNkk Thabethe, owayeyiMechanical Sales Engineer, uthi ngo-2018 wazithola ephelelwe wumsebenzi inkampani abesebenza kuyo ithuthela eGoli yena engeke akwazi ukuhamba ngoba engakwazi ukushiya umndeni wakhe.
“Kwakusaphele isikhathi esincane ngisuse izihlahla egcekeni lami ngatshala imifino ngenzela umndeni wami. Ngesikhathi ngiyeka umsebenzi kwakungekho ukuthi ngizoba wumlimi, ithuba lazifikela, ngalamukela ngase ngiqhubeka ngoba vele ikhono lokutshala nganginalo futhi ngiyakuthanda. Ngalowo nyaka uPick 'n Pay wawushodelwa u-green pepper wangicela ukuthi ngiwudayisele ngavumela phezulu,” kusho yena.
Wavuna wonke u-green pepper owawusengadini yakhe wawuhambisa khona, ngakusasa bamshayela ucingo becela omunye ngoba abebadayisele wona usuphelile.
“Angizange ngisho ukuthi anginawo ngavuma, ngangena ezinkundleni zokuxhumana ngacela kubalimi ukuthi bangisize. Ngathola omunye umlimi owayenawo u-green pepper omningi engenayo imakethe. Saqhubeka sisebenzisana kodwa senginakho ukuthi ngifuna ukuthi ngibe ngumlimi otshalela ukudayisa,” kusho yena.
OMUNYE wemikhiqizo kaNkk Nontando Thabethe u-green pepper awudayisela izitolo
Uthe ngenxa yevuso ayenalo lokuthi akhule emkhakheni wokulima, wafaka isicelo kwa-Oxford Fresh Market sokuthi abadayisele, basemukela isicelo sakhe.
“Uma ungasebenzi uyazikhandla ngoba uyazi ukuthi uma kuphela inyanga akukho okuzongena nami ngangiqhutshwa yilokho. Bathi bafuna u-cucumber ongu-30 000kg. Ngasebenzisa ikhono lami lobunjiniyela ngazenzela i-tunnel kulapho kwasunguleka khona ibhizinisi lokudayisa ama-tunnel elisaqhubeka namanje,” kusho yena
Njengamanje uthe usebenzisana nabanye abalimi abasathuthuka athenga kubo imikhiqizio ngoba akakabi nawo umhlaba owenele wokutshala yize enawo umhlaba atshala kuwo eZwelibombu nomunye oseBergville.